Usuku, konke okanye akukho nto ngonyaka we-2019 | Ezezimali
Enye yeenqobo ekuyakufuneka ithathele ingqalelo kulo nyaka sisandula ukuwuqalisa ngokungathandabuzekiyo lusuku oludwelisiweyo Akumangalisi ukuba yenye yexabiso eye yehla kakhulu kulo nyaka uphelileyo. Apho ifikile khona ulahlekelwe ngaphezulu kwe-100% yexabiso layo kwimarike yayo yemasheya, kwaye ibingumxholo wengcebiso engalunganga evela kubahlalutyi bezemali abanike iodolo yokuthengisa njengeyona iphakanyisiweyo. Nangona kungekho mathandabuzo ukuba ngeli xabiso nantoni na inokwenzeka ukusukela ngoku.
Inkampani yokuhambisa kwimveliso yokutya sele ingaphantsi kweyunithi ye-euro kodwa ndibonisa ukuba imeko yayo inokuba njalo ziya zisiba mbi kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Inokubekwa nangaphantsi kwe-0,50 euro ngesabelo ngasinye. Inokuba yintoni umqondiso omtsha onamandla wobuthathaka oya kuthi uthintele iintshukumo eziphindaphindayo kwixabiso. Ayothusi into yokuba ngeli xesha kunzima kakhulu ukuvavanya ukuba leliphi icala elinokuthatha.
I-Día yenye yezokhuseleko ezenza isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i Ibex 35, nangona amarhe athi angayishiya nanini na. Akumangalisi ukuba umthamo wayo wokurhweba wehle kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo ngenxa yokulahleka komdla phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Nokuba kunokwenzeka ukuba iyeke ukudweliswa kwiimarike zemali.
1 Usuku: ngezantsi kwe-1 euro
2 Unalo uhambo oluya phezulu?
3 Iziphumo ezimbi zeshishini
4 Urhwebo ngexabiso
Usuku: ngezantsi kwe-1 euro
Bonke abatyali mali bayamangaliswa kukuba amaxabiso esabelo sabo okwangoku angaphantsi kwe-euro enye. Ngokukodwa xa iminyaka embalwa edlulileyo yayikwinqanaba le 5 kunye nama-6 euros isabelo ngasinye. Ngamanye amagama, ulahlekelwe ngaphezulu kwe-100% yokuxabisa kwakho kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha. Kwesinye sezimanga ezinkulu kule minyaka idlulileyo kukulingana kwelizwe. Nangona kwelinye icala, bayazibuza ukuba lixesha elifanelekileyo lokuba bavule izikhundla kwixabiso ngexabiso eliphantsi kakhulu ngoku elibonisayo.
Ngayiphi na imeko, kufuneka icaciswe ukuba nangona izabelo zoSuku zithengisa ngaphantsi kweyunithi enye ye-euro, oko akuthethi ukuba isitokhwe sitshiphu ngexabiso. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, oko kubonisa yi ubuthathaka obukhulu kakhulu kwaye isenokuba nokuhamba okuninzi okuphantsi. Apho bekungayi kuba yinto engaqhelekanga kakhulu ukuba inokundwendwela amanqanaba asezantsi kancinci kune-0,50 euro kwiiveki ezizayo.
Unalo uhambo oluya phezulu?
Ukucaphula kumaxabiso akhoyo, kuyinto eqhelekileyo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba bazibuze ukuba eli xabiso ayilothuba lokwenyani lokuthenga. Ewe, kule ngqiqo, kukho abahlalutyi bezemali abakholelwa ukuba iDía kuya kufuneka iphinde ibuyise i-160% yovavanyo lwayo lwangoku. ukufumana amandla kwakhona. Yinto entsonkothileyo enokuyenza, ubuncinci kwixesha elifutshane neliphakathi. Ngenxa yokuba imeko yayo ngalo mzuzu icacile kuba ayisiyonto ngaphandle kwe-bearish kakhulu kuwo onke amagama otyalo mali.
Kwelinye icala, asinakulibala ukuba xa kuthengiswa ngezantsi Iyunithi ye-euro kunzima ngakumbi ukubuyisa eli nqanaba libalulekileyo. Njengoko kwenzekile kolunye ukhuseleko kuzwelonke olungene nakule meko inye. Nangona, kwelinye icala, kufanele ukuba kukhankanywe ukuba inokuba sesinye sezikhutshelo zesitokhwe esinamandla amakhulu okuhlaziya, kodwa ngomngcipheko ongaphezulu kokucacileyo kuko konke ukusebenza kwawo kwiimarike zezemali. Ngohlobo olukhulu kakhulu lokungaziphathi kakuhle kuba ibonisa umahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi.
Iziphumo ezimbi zeshishini
Enye into ekhokelele ukuba le nkampani idweliswe ngokwamanqanaba akhoyo ziziphumo ezibuthathaka zeshishini elizivelisileyo kwikota yakutshanje. Ngonyuso olubaluleke kakhulu kuyo ityala Unemibuzo malunga nokusebenza kwendlela yakho yeshishini. Kwelinye icala, kule meko, uthethathethwano kunye neebhanki zokunciphisa ukunciphisa ukuthatha ukubaluleka okukhethekileyo. Ewe imeko yayo yeshishini iye yawohloka kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo kwaye esi sesinye sezizathu zokuba ixabiso lesabelo sayo lehle ngamandla.
Kuya kufuneka kwakhona kukhankanywe ukuba ikhonkco lokuhambisa ukutya liphulukana nesabelo sentengiso xa kuthelekiswa nabona bakhuphisana nabo. Kule meko, sele bebambalwa abatyali mali abaqhubeka nokuthemba eli xabiso kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain. Ukuya kwinqanaba lokuba enye yezona ziphethe kakubi kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo. Ngokucacisa ngokucacileyo ukuthengiswa kwintengiso, ngamandla okungaqhelekanga kubonwe kwiminyaka edlulileyo. Kwaye ngale ndlela ayinyuki, ukude nayo.
Ngeli xesha, nakuphi na ukuthengiselana kungena kwinkampani edwelisiweyo kuthetha umngcipheko omkhulu ophakamileyo kunolunye ukhuseleko lwezemali. Ngayiphi na imeko, nje ukuba uphucule umlinganiso weshishini lakho, unokuvelisa umvuzo onomdla kakhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Iya kuba ngumlingane wethu ukuba le ntshukumo iya kuba nayo ukusukela ngoku. Hayi ngelize, i ukuhlaliswa iisenti ezimbalwa kumaxabiso azo zinokumela isixa see-euro ezininzi ekusebenzeni.
Ukusuka kolu luvo kutyalo-mali, iba lubuthathaka kakhulu kwimisebenzi eqhutywa kwiseshoni enye yorhwebo. Oko kukuthi, kwiintshukumo ezibiziweyo ngaphakathi. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uchaze ukuba le nkampani isasaza izabelo phakathi kwabanini zabelo minyaka le ngenzuzo ekufutshane ne-7%. Ukuba yenye yezona ziphezulu kwi-Ibex 35. Nangona ngaxa lithile inokuthi incitshiswe okanye isuswe ngenxa yokuwa kwengeniso yeli xabiso ukuze ummeli wezabelo eSpain. Ngokucacisa ngokucacileyo ukuthengiswa kwintengiso, ngamandla okungaqhelekanga kubonwe kwiminyaka edlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Usuku, konke okanye akukho nto ngonyaka we-2019
Athini amaxabiso akhethwe kwizikhundla ezimfutshane?